စိတ်စေစားရာ (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
မောင်နဲ့ကျမ ညားခဲ့တာ ၃နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပေမယ့်
ခုထိကလေးမရသေးဘူး။ မောင်က ကလေးအရမ်းလိုချင်လို့ ဆေးပေါင်းစုံနည်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ကလေးမရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် ချွင်းချက်က မောင့်ဘက်ကဖြစ်နေတော့ ကျမလည်းဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ။ မောင်အရမ်းတောင်းတတဲ့ မိသားစုဘဝလေးက ကျမတို့အတွက် အိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နေပါ တော့တယ်။ မောင်ကတော့ လက်မလျော့သေးပါဘူး
ခုလည်း သူ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့
ဆရာဝန်က နည်းလမ်းတစ်ခု အကြံပေးခဲ့တယ်တဲ့။
မအောင်တော့ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒေါ့….
ကာမဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲ ကျမသားအိမ်ထဲကို ထည့်ပေးရင် ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ မောင့်ဘက်ကသဘောတူလက်ခံရင်
သူ့ရဲ့ဆေးခန်းလာခဲ့ပါ သူကူညီပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မောင်ကစိတ်အားတက်ကြွစွာ ပြောပြနေတော့ ကျမလည်း ခေါင်းငြိမ့်ရတာပေါ့။
“ဒါနဲ့ မောင် ဘယ်သူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲဟင်”
“ယုံကြည်ရမယ့်သူရော ရှိလို့လား” လို့မေးတော့
“မောင်လည်းအဲ့ဒါ စဉ်းစားနေတာ၊ မျိုးရိုးကောင်းတဲ့သူ
လည်းဖြစ်စေချင်တယ်၊ မောင်ရဲ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်ကိုပဲ
“အင်းပါ မောင်ရယ်..၊ ကလေးရလာရင်ရော မောင့်ရဲ့
သွေးသားအရင်းလို ချစ်နိုင်ပါ့မလား မောင်က”
“ချစ်မှာပေါ့.. မောင်ကိုယ်တိုင်လိုချင်လို့ စီစဉ်ထားတာပဲ”
ဒါမဲ့ ကျမစိတ်ထဲမှာ သိပ်ပြီးအလိုမကျချင်ဘူး။ ကိုယ့်ယောက်ျားမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူရဲ့ရင်သွေးကို လွယ်ပြီးမွေးရမှာ
ဆိုတော့ စိတ်ထဲမချင့်မရဲနဲ့ သစ္စာဖောက်သလိုများ ဖြစ်နေမလားတွေးပြီး စိုးရိမ်မိတယ်။
ကျမမောင့်ကို မော့ကြည့်တော့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်
သန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတေနဲ့ ပြုံးနေတာတွေ့ရတယ်။
“ချစ် မောင့်ကိုသစ္စာဖောက်သလို ဖြစ်နေမှာစိုးတယ်”
တိုးတိတ်ညင်သာတဲ့ အသံလေးနဲ့ပြောပြီး ကျမမောင့်ကို
မောင်ကလည်း ကျမကိုယ်လေးကို သိုင်းဖက်လို့ နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး ငုံ့နမ်းလာတယ်။
“အာ့တော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ မောင့်ချစ်ဇနီးလှလှလေးကို
တစ်ခြားသူ လက်ဖျားနဲ့ထိတာတောင် မခံနိုင်ပါဘူး၊
ဒါကလည်း အထိအတွေ့နဲ့ဆက်ဆံတာမှ မဟုတ်ဘဲ၊
အရည်ကိုဆေးထိုးပိုက်ထဲထည့်ပြီး ချစ် သားအိမ်ထဲ
“အင်းပါ၊ မောင်ကချစ်ကို အချစ်ပေါ့သွားမှာစိုးလို့ပါ”
အချစ်တွေက တိုးပြီးတောင်လာမှာပါကွာဆိုးပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရနမ်းလိုက်တယ်။ ကျမလည်း မောင့်ခါးကို ပိုတင်းပြီးဖက်လိုက်တော့ မောင့်ရဲ့လီးကြီးကထောင်လို့
နှစ်ယောက်သား ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ရင်းနဲ့ ကာမစိတ်တွေကလည်းတက်လာ အိမ်မှာကလည်း နှစ်ယောက်တည်းနေတာ
ဆိုတော့ ဧည့်ခန်းထဲက စားပွဲပေါ်မှာပဲ ကျမလက်နှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီး ခြေနှစ်ချောင်းကိုကားလို့ ဖင်လေးကိုကော့ထားပေးလိုက်တယ်၊ မောင်ကလည်း ကျမလုံချည်ကို
ချွတ်ချလို့ စွန့်ကားနေတဲ့ ဖင်နှစ်ခြမ်းအောက်မှာ ပြူထွက်နေတဲ့ ကျမအဖုတ်လေးထဲကို သူ့လီးကြီးကိုအဆုံးထိထည့်ပြီး
ကျမဖင်သားတွေနဲ့ မောင့်ရဲ့ပေါင်တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အသံကလည်း တဖက်ဖက်နဲ့ စည်းချက်ကိုညီလို့။
ကျမလည်း ညည်းငြူသံလေးနဲ့ စကားတွေတတွတ်တွတ်
ပြောပြီး ဖင်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက် ကော့ကော့ထိုးပေးပြီး
နှစ်ယောက်အတူ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ရေချိုးကြရင်းနဲ့ တစ်ချီ
နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တော့ မောင်နဲ့ကျမ သူ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်ဆီ ကားနဲ့သွားကြတယ်။
ဟိုရောက်တော့ ဆေးခန်းမှာလည်း လူတွေရှုပ်လို့ ညနေမှအေးဆေး ပြန်လာခဲ့ပါပြောတာနဲ့ အိမ်ကိုပဲမောင်းပြီး
ပြန်လာရတယ်၊ ညနေ ၃နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့
ဆရာဝန်ကမောင့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ လာခဲ့တော့တဲ့၊ မောင်ကလည်း ဖုန်းထဲမှာပဲ တစ်ခြားလူရှာဖို့
အဆင်မပြေကြောင်းနဲ့ ဆရာပဲအစဆုံးကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ လူရင်းတွေဆိုတော့ ဆရာဝန်ကလည်းကူညီပါ့မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမတို့ ဆေးခန်းကို တစ်ခေါက်ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်ကအသင့်စောင့်ကြိုနေတယ်။ ပြီး သူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီး အကျိုးကြောင်းအကုန်ရှင်းပြတယ်။ သုတ်ရည်ကို ၃ရက်လောက်ဆက်တိုက်ထည့်မှ စိတ်ချ
နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်ကိုလည်းပူပူနွေးနွေးမခြောက်ခင်ထည့်ရမှာမို့ ရောက်လာမှပဲထုတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြော
မောင်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ဆရာအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စရအောင်ပြောတော့ ဆရာဝန်က ခနနော်
ကျမတို့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာပဲ စောင့်နေလိုက်တယ်။
အိမ်သာထဲ ဘာလို့သွားလဲဆိုတာ ကျမစိတ်ထဲသိပါတယ်၊
သူ့လရည်တွေ ထွက်အောင် ဂွင်းသွားထုဖို့ဆိုတာ
ပြီးရင် သူ့လရည်တွေကို ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲ
ထိုးထည့်တော့မှာကို တွေးမိတော့ မလုံမလဲနဲ့ မောင့်ရှေ့မှာ
ခနအကြာမှာတော့ အိတ်လေးတစ်ခုကိုင်ပြီး ဆရာဝန်
“ကဲ…ရပြီ၊ ခင်ဗျားမိန်းမကို အပြင်ကကုတင်မှာ
မောင်ကကျမလက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲခိုင်းလိုက်တယ်၊ ကျမလည်းမယောင်မလည်နဲ့ လှဲအိပ်နေလိုက်ရတာပေါ့၊ ဆရာဝန်က ခုနယူလာတဲ့ အိတ်ထဲကအရည်ဖြူဖြူတွေကို အပ်မပါတဲ့ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ကုန်တဲ့ထိစုပ်ယူနေတယ်၊
ပြီးတော့ ကျမရဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောင်ခိုင်းတယ်၊ ဆရာဝန်က အပ်ကြီးမြှောက်မြှောက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ဘေးတစောင်းထိုင် နေရာယူပြီး ဘာမှရှက်မနေဖို့နဲ့ အတွင်းခံလည်းချွတ်လိုက်ပါအုံးလို့ ပြောလာတယ်၊ မောင်ကတော့ ကျမဘေးနားမှာ ဘာမှမဖြစ်သလိုရပ်ကြည့်နေလေရဲ့၊ ကျမဖြင့်ရှက်လွန်းလို့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး မောင့်လက်ကိုစုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိတယ်၊ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်မသိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ အတွင်းခံချွတ်ပြီးတောင် ပြရတော့မှာဆိုတော့ ၊ ဒါမဲ့…မောင်အရမ်းလိုချင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်မိတယ်၊ ဒါနဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်ပေးလိုက်တယ်၊
ဆရာဝန်ရဲ့လက်တစ်ဖက်က ဆေးထိုးပိုက်ကိုကိုင်လို့ တစ်ဖက်က ကျမဒူးကိုကိုင်ပြီး ဖိဖြဲချလိုက်တယ်၊ ပြီးမှဆေးထိုးအပ်တံအရင်းထိရောက်အောင် ကျမအဖုတ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးချလိုက်တာ အေးစက်စက်မာတောင့်တောင့်ကြီးဆိုတော့ နည်းနည်းနာသွားတာပေါ့၊ အပ်ထဲကအရည်တွေ ထိုးချလိုက်တော့မှ အဖုတ်ထဲမှာ ပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့လရည်တွေက လျောခနဲကျမသားအိမ်ထဲကို ဝင်သွားပါတော့တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အတွင်းခံကိုပြန်ဝတ် လုံချည်ကိုပြန်ဖုံးလို့ ချက်ခြင်းထထိုင်လိုက်တယ်၊ ဆရာဝန်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရဲတော့ဘူး၊ ရှက်လွန်းလို့မျက်နှာကိုနီရဲနေတာပဲ။
ကျမတို့လည်း ဆရာဝန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
နောက်ညနေမှာလည်း ဆရာဝန်မှာတဲ့အတိုင်း မောင်နဲ့ကျမ ထပ်လာခဲ့ကြတယ်၊ အရင်နေ့ကလိုပဲ ဆရာဝန်ကအိမ်သာထဲဝင်သွားပြန်တာပေါ့၊ အဲ့ချိန်မှာပဲ မောင့်ဆီဖုန်းဝင်လာလို့ အပြင်ထွက်ပြီးဖုန်းသွားပြောတယ်၊ ခနနေပြန်ရောက်လာပြီး မောင့်အလုပ်ရှင်က အရေးကြီးလို့လာခဲ့ပါအုံးတဲ့ ခနနေပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ကျမလည်း တစ်ယောက်တည်းဆက်စောင့်နေရင်းနဲ့ ဆရာဝန်က နာရီဝက်လောက်ကြာမှ ထွက်လာတယ်။
ကျမတစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတာမြင်တော့ မျက်မှောက်ကျုံ့သွားပြီး “မင်းယောကျာ်းရော”တဲ့
သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလို့ မောဟိုက်နေတဲ့လေသံနဲ့ ပြန်ဖြေရှာတယ် ။
“ပြောရမှာတော့ အားနာတယ်ဗျာ၊ နေ့လယ်က
မိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်တော့ စိတ်ညစ်နေလို့ လုံးဝမထွက်ဘူး
“ဟင်..ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ပြန်ရတော့မှာပေါ့”
ကျမလည်း စဉ်းစားမိတယ်၊ နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားလို့ပေါ့၊ ဒါမယ့်..ဒီနေ့အလုပ်မဖြစ်ရင် နောက်တစ်ရက်ထပ်တိုးပြီးလာရမှာ စိုးတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြောသလို လက်ခံလိုက်တော့တယ်။
ကျမ ကုတင်ပေါ်တတ် လုံချည်လှန်ပြီး အတွင်းခံချွတ်ချပေးလိုက်တယ်၊ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မြန်မြန်ပြီးသွားရအောင် ဒူးနှစ်ဖက်ပါထောင်ပြီး ကားထားပေးလိုက်တယ်။
ဆရာဝန်လည်း ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ကျမခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး ပုဆိုးလှန်ကာ ပြဲအာနေတဲ့ ကျမအဖုတ်ကိုကြည့်လို့ တအင်းအင်းနဲ့ ဂွင်းထုနေပါတော့တယ်။
ကျမအဖုတ်ကိုကြည့်ရင်း တအင်းအင်းနဲ့ထုနေတဲ့အသံကြားတော့ ကျမစိတ်ထဲ မရိုးမရွှဖြစ်လာရတာပေါ့၊ အဖုတ်အတွင်းသားတွေပါ ယားလာပြီး အရည်တောင်စို့လာနေသလိုပါပဲ၊ ဆရာဝန်လည်း အရှိန်ရလာလို့ထင်ပါရဲ့ ကျမဒူးတစ်ဖက်ကိုတွန်းကိုင်လို့ ရှေ့ကိုကုန်းပြီး ထုလာတယ်။
နောက်တော့ သူ့လက်က ဒူးပေါ်ကနေ ကျမပေါင်သားတွေဆီ မသိမသာ ပွတ်သပ်လာတယ်၊ ကျမလည်းမသိသလိုနေလိုက်မိတယ်၊ ကျမမှာ တစ်စိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်ရင်းထိပွတ်သပ်လာတဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ မသိစိတ်ထဲက ကာမစိတ်တွေထလာမိတယ်ရှင်။
“ရှင်” လှိုက်ဖိုနေတဲ့အသံနဲ့ ကျမပြန်ထူးမိတယ်။
အဓိက ညီမအဖုတ်ထဲဆရာ့လရည်တွေ ဝင်ဖို့ပဲလေ”
ညီမအဖုတ်လေးထဲသွင်းပြီး လရည်တွေ ထုတ်ပေးတော့မယ်နော်”
“မလာနိုင်သေးပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး ထောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ကျမအဖုတ်ပေါ် လာထောက်ထားတော့တယ်။ ကျမလည်း စိတ်ရဲ့စေရာအတိုင်း မငြင်းမိဘူး။
ကျမဆီက အသံမကြားရတော့ ကျမအဖုတ်လေးကိုဖြဲပြီး နီရဲနေတဲ့ သူ့လီးဒစ်ကြီးကို ထိုးစိုက်ချလိုက်တယ်၊ သူ့ဒစ်ကြီးက ကားကားကြီးနဲ့အကြီးရီးဆိုတော့ အဖုတ်ဝမှာ ဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမမှာ အသက်အောင့်လို့ “အင်း”ကနဲ ခါးကော့ခေါင်းမော့ သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ရာခင်းစကို သတိလက်လွတ် ဆွဲချေစုပ်ကိုင်ထားမိတယ်။
ရှုံ့မဲ့မဲ့မျက်နှာလေးဖြင့် အသနားခံသလို ညုသလိုအသံလေးနဲ့ပြောလာတော့ ကျနော်လည်း စိတ်တွေပိုထလာပြီး လီးကိုအဆုံးထိ ထိုးချပစ်လိုက်တယ်။
“နောက်တော့ ဆရာဟာကြီးကို ကြိုက်သွားမှာပါကွာ”လို့
ပြောပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ ဇနီးလှလှလေးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ စောင့်လိုးနေလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမမှာ အသက်အောင့်လို့ “အင်း”ကနဲ ခါးကော့ခေါင်းမော့ သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ရာခင်းစကို သတိလက်လွတ် ဆွဲချေစုပ်ကိုင်ထားမိတယ်။
သူ့ဆေးခန်းက ကုတင်လေးကလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ကျမအပေါ်ကနေ စောင့်လိုးနေလိုက်တာ တကျွီကျွီနဲ့ ယိမ်းထိုးနေတော့တာပဲ၊ ခုလိုးနေတဲ့လူက ကျမယောက်ျားမဟုတ်ပေမယ့် အဖုတ်ထဲကို ပြည့်သိပ်ပြီးဝင်ဝင်လာတဲ့ သူ့လီးကြီးကြောင့်
မောင်ပြန်လာရင်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကလည်း ရှိသေးတာမို့ အရမ်းကောင်းနေပေမယ့် မြန်မြန်ပြီးစေချင်နေရတာပေါ့။
ကျမလည်း ဟန်ဆောင်ပြီးပြောနေပေမယ့် စိတ်ထဲကသူ့လီးကြီးကို ကျမအဖုတ်ထဲစိမ်ပြီး ညှစ်ထားပေးချင်သေးတာပေါ့။
အရမ်းကောင်းနေတဲ့ သူမမျက်နှာလေးကြည့်ပြီး အကြာကြီး ဇိမ်စွဲလိုးချင်သေးပေမယ့် သူမယောက်ျားပြန်လာရင် ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးပျက်ဆိုသလိုဖြစ်မှာဆိုးတာနဲ့ပဲ ကျနော်လည်း မြန်မြန်လေးစောင့်လိုးပေးပြီး သူမအဖုတ်ထဲကို ကျနော့်လရည်တွေ အဆက်မပြတ် ပန်းထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
“ကဲ..ညီမလိုချင်တဲ့ ဆရာ့လရည်တွေ ညီမအဖုတ်ထဲကို
ပြီးလည်းပြီးသွားရော ကျမမျက်နှာတစ်လုံး နီရဲနေတာပါပဲ၊ သူ့လရည်တွေ ပေကျံနေတဲ့ ကျမအဖုတ်တစ်ဝိုက်ကိုလည်း တစ်ရှူးစနဲ့သုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်၊ ပြီးမှ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ် ရုံးခန်းထဲမှာ မောင့်ကိုထိုင်စောင့်နေလိုက်ကြတယ်၊ နှစ်ယောက်တည်းအခန်းလေးထဲမှာ အနေရခက်လာတာနဲ့ မောင့်ဆီဖုန်းဆက်ပြီး Taxiငှားပြီးပြန်လိုက်တော့မယ်၊ မောင်အားတဲ့နေ့မှ ပြန်လာရအောင်ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်၊ မောင်သဘောတူထားပေမယ့် မောင့်နောက်ကွယ်မှာ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဆက်ဆံမိခဲ့သွားတာက ကျမရဲ့ အပြစ်တစ်ခုလိုခံစားရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် နောင်အရှုပ်အရှင်းမရှိရလေအောင် ဆရာဝန်ကို ကတိတောင်းရတယ်။
“ဆရာ..ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်နဲ့ ကျမတို့သိက္ခာကို ထောက်ပြီး ဒီကိစ္စကို ဒီမှာပဲထားပေးပါ၊ ကလေးရလာရင်လည်း ဘာမှမဆိုင်သလိုနေပါမယ်လို့ ကတိပေးပါ ဆရာ”
“ပေးပါတယ်၊ ဆေးပညာအရ အကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ့မယ်၊ ညီမဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်”
ကျမလည်း ဆရာ့ကိုနူတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။
အိမ်ရောက်တော့ မောင်ပြန်မရောက်သေးဘူး၊ ကျမတစ်ယောက်တည်း ဆရာဝန်နဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့ အဖြစ်ကိုပြန်တွေးပြီး နောက်နေ့တွေသွားရမှာ မဝံ့မရဲဖြစ်မိပါတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ရလာတဲ့ကိုယ်ဝန်က ဆရာဝန်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ပဲ ဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြေသိမ့်ရင်း အဝတ်စားလဲ ရေချိုးပြီး မောင့်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်၊ ၆နာရီထိုးလောက်တော့ မောင်ပြန်လာတယ်၊ ကျမလည်း ဒီနေ့အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း လိမ်ညာပြီးပြောလိုက်တော့ မောင်ကနောက်ရက်တွေ ထပ်သွားတာပေါ့တဲ့၊ ကျမ မောင်မသိအောင် သက်ပြင်းတစ်ချက်ခိုးချလိုက်မိပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ရက်တွေ မောင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တူပဲ သွားဖြစ်ကြတယ်၊ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ မောင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ရရှိရေးစီမံကိန်းကြီး ပြီးသွားပါတော့တယ်။
တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ မောင့်မိတ်ဆွေဆရာဝန် ကျမတို့အိမ်ကို ရံဖန်ရံခါရောက်ရောက်လာတတ်တယ်၊ အစတော့ ရိုးရိုးသားသားအလည်လာတယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကျမအပေါ်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေက မရိုးသားဘူးဆိုတာ သတိထားမိလာတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်၊ သူနဲ့တစ်ခါလိုးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အသိကလည်း ကျမရဲ့ကာမစိတ်တွေ ကြွလာစေတာပေါ့၊ သုံးယောက်သားစကားပြောနေရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ကျမသူ့ကို မခို့တရို့မျက်စောင်းထိုးထိုးပြီး ကြည့်မိတယ်၊ သူကလည်း ကျမယောက်ျားကွယ်ရာဆို မထိတထိစကားတွေ ပြောတတ်လာတယ်၊ တစ်ခါကဆို ဆရာဝန်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကို မောင်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးတော့ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ မောင်နဲ့ကျမကတစ်ဖက် ကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဆရာဝန်ကထိုင်လို့ သူ့မိန်းမကဘေးမှာထိုင်စားဖြစ်ကြတယ်၊ ကျမက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို စားပွဲအောက်တန်းပေါ်တင်ပြီးစားနေရင်း ခြေဖျားထိပ်ကို တစ်ခုခုထိသလိုဖြစ်လို့ မော့ကြည့်တော့ ဆရာကမသိလို ကျမကိုပြန်ကြည့်တယ်၊ ကျမလည်း ခေါင်းငုံ့ပြီး ထမင်းဆက်စားနေလိုက်တယ်၊ နောက်တစ်ခါကျ ကျမခြေဖမိုးပေါ် လာဖိထားတယ်၊ ဆရာလုပ်နေတာသိလို့ ကျမဘာမှမဖြစ်သလို ငြိမ်နေလိုက်တော့ ခြေသလုံးတွေထိပါပွတ်လာတယ်၊ နောက်ပိုင်းအားမရတော့ သူ့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်ပြီး ဆွဲချလိုက်တာ ကျမခြေနှစ်ချောင်းက စားပွဲအောက်ဆန့်ဆန့်ကြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ကျမလုံချည်အောက်ကနေ သူ့ခြေထောက်တွေ ပေါင်ရင်းထိထိုးတက်လာတော့ ကျမလည်း စားပွဲရှေ့ကို မသိမသာတိုးကပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့
ကျမရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သူ့ခြေမကြီးနဲ့ အဖုတ်ကို ထိုးကလိပေးနေတာ ထမင်းစားမပျက်ဟန်မပျက်ပါပဲ
ထပြောလို့လည်းမကောင်း ဖြစ်နေတော့ သူကလိနေသမျှ ဟန်မပျက်ထမင်းဆက်စားနေလိုက်တယ်၊ အဖုတ်လည်းအရည်တွေရွှဲလို့ ထမင်းစားပြီး ဆရာဝန်လင်မယားပြန်သွားတာတောင် ကျမမှာ လှိုက်ဖိုကျန်ခဲ့ရတယ်၊ ည မောင်နဲ့လြိုး ဖစ်ကြတော့ မောင်ကကျမခြေနှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ဖင်ထောင်လိုးတာ ကျမဖြင့်ကောင်းလွန်းလို့ တစ်ချက်တစ်ချက်ဆို ဆရာဝန်မျက်နှာကို ရောင်ရမ်းပြီး မြင်ယောင်မိသေးတာပေါ့ရှင်။
ကျမတို့ ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျမတို့အိမ်ကို အလည်လာနေကျ ဆရာဝန် ပျောက်ချက်သားကောင်းနေခဲ့တယ်၊ မောင့်ကိုတော့ မမေးကြည့်မိပါဘူး၊ တော်ကြာတစ်မျိုးထင်သွားမှာဆိုးရတယ်လေ၊ ကျမမသိစိတ်ကပဲ တိတ်တခိုး မျှော်နေမိတာပါ၊ တစ်ခါပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဆေးပညာအရ ပတ်သက်ခဲ့တာဆိုတော့ လိပ်ပြာမလုံတော့ မဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ဘက်က နောက်ပိုင်းကျမအပေါ်ပြောင်းလဲဆက်ဆံလာမှုတွေအပေါ်တော့ သာယာသလိုလိုနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး ကျမအဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးပေးမှာကို မဝံ့မရဲ မျှော်လင့်နေမိတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက်အကြာမှာတော့ ဆရာဝန် ကျမတို့အိမ်ကို ရောက်လာပါတယ်၊ သူရောက်လာတော့ မောင်ကမရှိဘူး၊ ကျမတစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ချိန်မှ ဆိုက်ဆိုက်မြုက်မြုက် ရောက်ချလာတာ၊ တမင်လာတာလား.. မသိလို့လာတာလား မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ ကျမလည်း မောင်ပြန်မလာသေးဘူး..ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ မျက်နှာတမင်တည်ပြီး မေးလိုက်တော့…
နယ်ဘက်ရောက်နေတဲ့တွက် မလာဖြစ်တာကြာလို့ ဝင်လာတာဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီးကျမကိုယ်ဝန်ရမရ သေချာအောင် စစ်ပေးမလို့ လာတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။
ကျမအတွန့်တက်ပြီး မေးလိုက်တော့ ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိတာပဲ ထပ်ပြီးလုပ်ပေးမှာပေါ့တဲ့…
“ဟွန့်… လူလည်ကြီး” ဆိုပြီး ကျမနုတ်ခမ်းလေးစူ မျက် စောင်းလေးထိုးပြီး ကလေးတစ်ယောက်ဆိုးနွဲ့သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ မျက်နှာကလေးစူပုပ်လို့နေလိုက်တယ်၊ ကျမတမင်သက်သက် ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ပြနေတာပါ၊ ကျမရဲ့ကာမဆန္ဒတွေ ဆရာဝန်ဆီ ပုံချပေးချင်နေမိပါပြီ။
“လူလည်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. ညီမဟာလေးက
တစ်ခါတည်းနဲ့ တစ်သက်စွဲအောင် ကောင်းတာကိုး”
“ဟင်…တကယ်ပေါ့” ကျမလည်း မခို့တရို့မျက်နှာလေးနဲ့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။
“အင်းပေါ့၊ ညီမ… ညီမကိုဆရာအရမ်းစွဲလမ်းမိနေပြီ”
ကျမ ဆရာ့ကို ဂရုနာသက်ဟန်နဲ့ မော့ကြည့်မိတော့ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျမပုခုံးပေါ်လာကိုင်ပြီး မျက်နှာကအောက်ကို ညွှတ်ကျလာတယ်၊ သူဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတာ သိနေတဲ့ကျမ မျက်လုံးကလေးစင်းလို့ သူ့ရဲ့အနမ်းတွေခံယူဖို့ ကျမနုတ်ခမ်းတွေ မပွင့်တပွင့်လေးဟထားပြီး လည်တိုင်ကိုမော့ထားပေးမိတယ်၊ ကျမနှာခေါင်းထဲ ရေမွှေးနံ့တစ်ခု ဝင်လာစဉ်မှာပဲ ကျမနုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို စွဲစုပ်ခံလိုက်ရတယ်၊ တကိုယ်လုံးကို ဖိန်းရှန်းသွားပြီး ကျမအဖုတ်ထဲ ကျင်ခနဲ ခံစားမိလိုက်တယ်၊ သူ့လက်တွေကလည်း ပုခုံးပေါ်ကနေ ချပြီး ကျမရဲ့ခါးသိမ်သိမ်ကျစ်ကျစ်လေးကို သူ့ကိုယ်နဲ့ထိ အောင်စွဲကပ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ မာတောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမဆီးခုံကိုလာထောက်တော့ ကာမစိတ်တွေ ပိုပြီးထကြွလာတော့တာပေါ့၊
ကျမနုတ်ခမ်းကိုလည်း တယုတယနဲ့စုပ်ပေးရင်း လက်က ကျမရဲ့စွင့်ကားနေတဲ့ တင်သားတွေပေါ် အလိုက်သင့်ပွတ်ပေးနေသေးတယ်၊ နောက်တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကို လက်နှစ်ဖက်ရှိူသွင်းပြီး တင်သားတွေအောက်ကနေပင့်ဆွဲလို့ ကျမဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက် စုတ်ခြေလိုက်ပွတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် အတွင်းခံပေါ်ကနေ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမအဖုတ်ကို ပင့်ပင့်ထိုးနေလိုက်တာ ကျမဖြင့် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပြီးလုပြီးချင်တောင် ဖြစ်ဖြစ်သွားမိတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ပြုစုယုယမှုတွေအောက်မှာ သူမတော်တော်ထန်နေပြီဆိုတာ ကျနော့်ခါးကို သူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လာဖက်ထားတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်၊ သူမရဲ့ပုံစံလေးက အသားဖွေးဖွေးနှာတံစင်းစင်းနဲ့ နုတ်ခမ်းလေးတွေကလည်း ဖောင်းအိအိလေးတွေ၊ စုပ်နေရင်းနဲ့ချိုချိုလာသလိုပဲ၊ မလွှတ်ချင်တော့လောက်အောင်ပါပဲလေ။
သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ခါးလေးကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ တင်သားတွေနောက်ကို စွင့်ကားနေပြီး ပေါင်တံလေးတွေကစင်းကျနေတော့ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ သူမအဖုတ်လေးကို စောင့်လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတော့
တယ်၊ ဒါနဲ့ သူမအဖုတ်လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကနေ နှိုက်လိုက်မိတယ်၊ Ooh… အရည်တွေရွှဲလို့ သူမဘယ်လောက်တောင် ခံချင်နေပြီလဲမသိဘူး၊ ကျနော်လည်း သူမ စောက်စိလေးကို လက်ခလယ်နဲ့ပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်။ “အင့်ခနဲ” အသံထွက်လို့ ကျနော့်ကို မော့ကြည့်လာတယ်။
“ဆရာ..ဧည့်ခန်းကြီးထဲမှာ မကောင်းဘူး တော်ပြီကွာ”
မောဟိုက်နေတဲ့ လေသံနဲ့ ကျနော့်ကို ဆက်မလုပ်ဖို့တားတယ်။ အရှိန်တက်နေပြီဆိုမှ လာတားတော့ နည်းနည်းဖီးလ်ပျက်သွားရတာပေါ့။
“ဟာ…ညီမကလဲ၊ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး၊ ဆရာ့စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ဘူး”
“ဟင်..! မောင်လာလို့ရင် တွေ့သွားလိမ့်မယ်”
နှစ်ယောက်စလုံး ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေကြပြီဆိုပေမယ့် ………
ဒီထက်ပိုဆက်လုပ်ဖို့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျမ မဝံ့မရဲဖြစ်နေမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ကျမစိတ်ကိုကျမ ၃မိနစ်ကြာအောင်တောင် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ကျမစိတ်တွေ အရမ်းထန်နေပြီလေ။ ဆရာ့ကိုလည်း တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေတော့ စိတ်ရဲ့စေရာအတိုင်း ကျမနဲ့မောင်နဲ့အိပ်တဲ့ အခန်းထဲ ခေါ်သွားလိုက်မိတော့တယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ကျမအဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပစ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှဲ ဒူးနှစ်ဖက်ထောင်ထားပေးလိုက်တယ်၊ ဆရာလည်းအဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်လို့လီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်လာတယ်၊ သူ့လီးဒစ်ကြီးက ပြဲလန်ပြီးကားနေတာပဲ၊ ဂွေးဥနှစ်လုံးကလည်း အမွှေးဗလပွနဲ့ မောင့်လီးလို ရှင်းပြီးလုံးချောမနေဘူး၊ လီးချောင်းကြီးကလည်း သံချောင်လိုမာတောင်နေပြီး အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ ဖုထစ်နေလိုက်တာ ကျမဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကြက်သီး တွေတောင် ထလာမိတယ်။
ကုတင်ပေါ်ရောက်လာတော့ ကျမခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်၊ နောက်ပြီး ကျမခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဒူးကောက်ကွေးကနေကိုင်ပြီး ကျမနို့အုံ ဘေးထိ ဖိချလိုက်တော့ ကုတင်ကနေ ကျမရဲ့ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး မြောက်တက်သွားတယ်၊ ကျမဖင်နှစ်ခြမ်းကတော့ အစွမ်းကုန်စွင့်ကားပြီး ပြဲနေတော့တာပေါ့။
ဆရာက သူလိုချင်တဲ့ အနေအထားလည်းရောက်ရော စောက်ရည်တွေရွှဲပြီး ပြဲအာနေတဲ့ ကျမအဖုတ်အုံတစ်ခုလုံးကို ငုံ့ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲခနငုံထားလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ ကျမအဖုတ်တပြင်လုံးကို လျှာပြားနဲ့လျှက်လိုက်၊ ဘေးနုတ်ခမ်းသားတွေ လျှက်ပေးလိုက်နဲ့ စောက်စိကိုလည်း ကျွတ်ထွက်မတက်စုပ်ပေးနေတော့ ကျမမှာ တအင်းအင်း ငြီးငြူလို့ ကျမဒူးကောက်ကွေးကို တွန်းဖိထားတဲ့ သူ့လက်ကို ရောင်ရမ်းပြီး ဆွဲထားလိုက်မိတယ်။
“ဟုတ်..၊ အရမ်းခံချင်နေပြီ၊ ဆရာ့လီးကြီးကို ညီမအဖုတ်ထဲသွင်းပေးပါတော့”
“စိတ်ချပါ ညီမရယ်၊ အကြာကြီးသွင်းထားပေးမှာပါ”
ဆရာကပြောပြောဆိုဆို အလိုက်သင့်ကားပေးထားတဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲကို သူ့လီးကြီး ဒစ်မြုပ်ရုံလေးသွင်းပြီး ဆော့ပေးနေသေးတယ်၊ နောက်မှ အဆုံးထိမြုပ်အောင်သွင်းလို့ မစောင့်သေးဘဲ ကျမနို့တွေကို ကိုင်စုပ်ပေးနေလိုက်တယ်၊ ခနကြာတော့ နို့စုပ်တာရပ်ပြီး ကျမခါးကိုကိုင်လို့ တဖက်ဖက်နဲ့စောင့်လိုးတော့တာပဲ၊ စောက်ဖုတ်ထဲကို တင်းကြပ်ပြီးဝင်ဝင်လာတဲ့ သူ့လီးကြီးက ကျမသားအိမ်ကို လာလာထောက်နေတော့ ကောင်းကလည်းကောင်းနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့ပြီး ခံနေမိတော့တယ်။
“အား ကောင်းလိုက်တာညီမရယ်၊ ညီမအော်တဲ့အသံလေးက ဆရာ့လီးကိုပိုကြီးလာသလိုပဲ”
ိ”ဖက် ဖက် ဖက် ဖက်”
မောင့်သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ရဲ့ စောင့်လိုးချက်တွေအောက်မှာ ကျမ နာလို့အော်မိလိုက် ကောင်းလို့ညည်းမိလိုက်နဲ့ နာရီဝက်လောက်ကြာတဲ့ထိ အောက်ကနေ ကားကားလေးခံနေမိတယ်၊ အပေါ်ကလိုးရတာညောင်းတော့ ကျမကို သူ့အပေါ်တက်ပြီး စောင့်ခိုင်းတယ်၊ ကျမလည်း နှစ်ခါပြောစရာမလိုအောင်ဘဲ သူ့အပေါ်တက်ခွပြီး ကျမကိုယ်တိုင်သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ကျမအဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖိချလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ အပေါ်ကနေ စောင့်ပေးလိုက် ဇကောဝိုင်းပေးလိုက်နဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ညှောင့်ပေးနေမိပါတယ်။
“ညီမ လေးဘက်ထောက်ပေးတော့၊ ညီမရဲ့ဖင်ကြီးကို နောက်ကနေကြည့်ပြီး လိုးချင်လို့”
“ဟုတ် ဆရာ၊ ဆရာသဘောရှိတဲ့တိုင်းလုပ်ဖို့ အကုန်ပေးထားပြီသားပါနော်”
ကျမလည်း ဆရာရဲ့ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်လောက်အောင်ပဲ ကာမစိတ်တွေ မွှန်ထူနေပြီ၊ ဆရာ့လီးကြီးကိုလည်း အရမ်းစွဲနေမိပါပြီလေ၊ သူပြောတဲ့အတိုင်း ဒူးကလေးထောက်လို့ ဖင်ကိုအစွမ်းကုန် ကော့ထောင်ပေးလိုက်တယ်၊ ဆရာကနောက်ကနေ ကျမဖင်ကြီးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြီးမှ ပြူထွက်နေတဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲကို အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ တဆုံးထိုးချလို့ ကျမပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး မီးကုန်ရမ်းကုန်စောင့်လိုးပြန်တော့တယ်၊ ကျမလည်း ဆရာရဲ့စောင့်ချက်တိုင်းကို ဖင်တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူနေမိတယ်၊ ဆရာကနောက်ကလိုးနေရင်း ကျမတင်ပါးတွေရိုက်လို့ သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်နဲ့ပြန်ပြန်စောင့်ခိုင်းသေးတယ်၊ ကျမလည်း ရှေ့ကနေပြန်စောင့်ပေးလိုက် ဆရာကနောက်ကစောင့်လိုးလိုက်နဲ့ စည်းချက်ဝါးချက်ကိုညီလို့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာမှ ကျမအဖုတ်ထဲကို သူ့လရည်တွေ တဗျင်းဗျင်းနဲ့ ပန်းထုတ်နေလိုက်တာများ ကျမအဖုတ်ထဲကို ဆည်ကျိုးကျနေသလားမှတ်ရတယ် တစက်စက်နဲ့ ထုတ်လို့ကို မပြီးနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။